मंसिर २० गते शनिवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
यी अक्षरबाट नाम हुने युवतीले गर्छन् आफ्नो मान्छेलाई धेरै माया !
यी हुन् श्वेतासँग मंसिर २२ गते लगनगाँठो कस्ने विजयेन्द्र सिंह
ट्रिपरको धुलोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेपछि जागे स्थानीय !
अमेरिकाबाट फर्किएर वर्षाले सुरु गरिन् ‘परदेशी २’ को छायांकन
तातो पानी पिउने बानी छ भने एकचोटी नछुटाई पढ्नुहोस है
घरमै बसेर यसरी भर्न सकिन्छ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फारम, तरिका सहित !
शनिबार पर्सा प्रहरीले बरामद गरेको २३ किलो सुन दुइ घण्टामै सुनजवस्तो देखिने बस्नु भएको छ । शनिबार अपराह्न ४ बजेर १३ मिनेटमा २२ किलो ६७५ ग्राम सुन बरामद गरेको समाचार भाइरल बनेको थियो । पर्सा प्रहरीले पठाएको विज्ञप्तिबाट सबैले करिब २० करोड मूल्यको सुन बरामद भएको समाचार दिए ।
तर, पर्सा प्रहरीले दुइ घण्टापछि विज्ञप्ति सच्याउँदै सुनजस्तो देखिने बस्तु बरामद भएको जनाएको छ । बरामद हुनासाथ सुन भनेर विज्ञप्ति पठाएको पर्सा प्रहरीले नै साँझ ६ बजेर २१ मिनेटमा अर्को विज्ञप्ति पठायो । जसमा उल्लेख थियो, २२ किलो ६७५ ग्राम सुन बरामद भएको भनिएकोमा सुनजस्तो देखिने पदार्थ भएकाले सच्याइएको उल्लेख छ । यसअघि पनि सुन बरामद भएर पितल बनेको धेरै घटनाहरू भएका कारण यसमा पनि धेरैले शंका गरेका छन । यद्यपी विस्ताै सबै तथ्यहरू बाहिर आउँदै जानेनै छ ।
चितवनमा जान रोक्किएपछि पर्सा सरुवा भएकी एसपी गंगा पन्तले आफ्नो एकपछि अर्को खुबी देखाएको भन्दै उनको चर्चा सुरु भएको २ घन्टामै सेलाएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित गणेश अपार्टमेन्टबाट प्रहरीले शनिबार पहेंलो धातु बरामद गरेको हो।
बरामद पहेंलो धातुमध्ये २२ किलो विस्कुट आकारको र अन्य आधा किलो गरगहना रहेको बताइएको छ।
कैलालीको घोडाघोडीमा वडा कार्यालयको भवन उद्धाटनमा विबाद ! सिलालेखमा उप-मेयर थापा द्धारा ढुङ्गा प्रहार गर्दै नगर सरकार बिरुद्ध नै नाराबाजी !!
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतवार, कार्तिक २, २०७७ १४:१४:१६
यस्तो बन्यो श्वेता खड्काको विवाहको कार्ड (कार्डसहित)
पुर्व मिस नेपाल मलिना जोशी पनि यत्ति हट !
नवपंचक योगले गर्दा यी ५ राशिहरुलाई मिल्दैछ अत्याधिक सफलता !
सुशान्तको फ्यानले भने, “अंकिताको अस्ली स्वरुप नदेखाई मार्यौं, धन्य छौं भगवान”
भाईटिकाको दिन मृत्यु बाणको हल्ला, यस्तो छ वास्तविकता !
जिम मास्टर रिचीको भुतुक्कै बनाउने जिउडाल हेरौं तस्विर
गर्भवती अनुष्कालाई व्यायाम गर्न सघाउँदै कोहली
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको फेसबुक पेज ह्याक
हिटर बालेर सुत्दा बौद्धमा १ महिनाकी छोरीसहित आमाको ज्यान गयो
दमक मालपोतमा घुस लिएको भिडियो खिचेका पत्रकार घिमिरेलाई कर्मचारीले कुटे
साथीलाई अन्तिम शुभकामना दिँदै कहिल्यै नझुल्किने गरी अस्ताए निरज
अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् : “प्रधानमन्त्री ओलीमा लोकतान्त्रिक चरित्र छैन”
“वाजिदको निधनपछि मलाई परिवारले धर्म परिवर्तनकालागी दबाब दिईरहेको छन्”
हेमा मालिनीको घरमा जुम्ल्याहा सन्तान भित्रिए
आज मंसिर १६ गते मंगलबार, यी ५ राशिकाे चम्किदैछ भाग्य…